Adobe Kugadzira Cloud: Verenga iyo Yakanaka Dhinda paRayisense! | Martech Zone
Pakatangwa Adobe Creative Cloud, ini ndakasaina! Hapanazve kutenga marezinesi anodhura uye kugadzirisa maDVD makiyi… ingo kurodha pasi nekumisikidza pazvinenge zvichidiwa. Tine timu inoshamisa inoshanda pane edu dhizaini, asi isu tinowanzo fanirwa kuita yekukurumidza kugadzirisa kana kugadzirisa mushure mekutora mafaera kubva kune edu madhizaina, saka ndakatenga rezinesi. Wangu bhizinesi shamwari akatanga kubatsira, saka ndakamutengera rezinesi rechipiri kwaari, futi. Uyezve mumwe wevatengi vedu anga asina bhajeti rezinesi asi aida kugadzirisa mafaira nguva nenguva, saka ndakavatengera rezinesi.
Handina kumbobvira ndaverenga iro Rakanaka Dhinda
Ndakafunga kuti ndanga ndichingobhadhara pamwedzi rezinesi muripo uye ndinogona kuwedzera nekubvisa marezinesi pazvinenge zvichidiwa. Ndakaona nenzira yakaoma kuti handizvo. Mushure mekunge mumwe wandinoshanda naye atangisa kambani yake uye mutengi wangu arega mushandi achienda… ndakazviwana ndichibhadhara marezinesi maviri asina kushandiswa mwedzi wega wega. Mushure mekugumburwa nepanzvimbo inotyisa yekutonga yeAdobe Creative Cloud uye kubvisa vashandisi vaviri, ndakaona kuti rezinesi kuverenga rakaramba rakafanana.
Kutsvaga nekukurumidza kwe "bvisa marezinesi" mune yavo ruzivo base yakapa mhinduro hapana kana munhu akamboda… tsigiro yekubata. Ugh… Ndakavhura hwindo rekutaura. Ndakafunga kuti pamwe mumwe munhu arikutaura neni kunze kwekuremadza marezinesi. Mushure memaminetsi makumi maviri nemaviri nemasekondi makumi mashanu nerimwe, vakaita. Asi zvinogona kunge zvisiri izvo nei uchifunga.
Iyo chaiyo yekutaurisa inosanganisirwa pamusoro kuti ikuratidze iyo isina maturo toni yandakakandirwa, iyo yakanyatso kufuratira iyo chokwadi chekuti ndiri kushandisa yangu yangu rezinesi Ndinoziva kukura kwakaita chirongwa ichi, ini akatenga rezinesi!
Kambani saizi yeAdobe inofanirwa kunyara nokutendeseka ichishandisa zano iri kubvarura vatengi vavo pamari shoma. Ini handina kuziva kuti ndanga ndisingazivi ndichisayina chibvumirano chitsva chegore. Ndinoona mamwe mabhizinesi akaomarara pabhodhi mitengo nevatengi, asi izvo hazvipo neAdobe Creative Cloud. Kungofanana nechero imwe SaaS chikuva, ndinofanira kukwanisa kuwedzera uye kubvisa marezinesi evashandisi pazvinenge zvichidikanwa. Chikonzero ini ndakanyoresa ndechekuti ini ndiri mushandisi akatendeseka aikoshesa kukosha kwepuratifomu uye akazvipira kubhadhara iyo.
Iye zvino ndiri kubhadhara 300% yemari yangu yelayisensi yeAdobe Creative Suite nemamwe marezinesi maviri akarara. Adobe, ndinenge ndichikudaidza iwe Chikunguru 16, 2018. Pamwe yave nguva yekuti nditsvage mamwe mapuratifomu.
yambiro: Iko hakuna zvakare sarudzo pane yehutungamiriri pani yekudzima auto-kuvandudza.
Tags: kupiswaadobe rekugadzira goreadobe yekugadzira suiterezinesi reAdobecreative cloudkutyora